DOWNLOAD Polikarpov U-2 (Po-2) kunonoka dzakatevedzana v1.0 FSX & P3D - Rikoooo
Polikarpov U-2 (Po-2) kunonoka dzakatevedzana v1.0 FSX & P3D
Downloads 5 733
Created 19-07-2013 03:00:02
Changed 30-05-2015 19:03:46
Legend of Soviet avhiyesheni, U-2, akasikwa ave nomurovedzi, nokuti yaitsiva zvisingachashandi U-1 (AVRO-504K kopi). Ndege yakagadzirwa uye yakavakwa 35-makore mwanakomana mupristi, Nikolai Polikarpov muna June 1927. The musiyano wezvinyorwa wokutanga whith ane rectangular wingtips uye gobvu airfoil, akanga kubudirira.
Wechipiri version (pamwe woita wingtips uye airfoil itsva) akanga flewn January 7, 1928 nokuda bvunzo mutyairi M.Gromov, uye akawana soro Rating.
Misa kweShanduro U-2 akatanga muna March 1928 kubudikidza plant¹23 muna Leningrad. Pashure pehondo, ivo Serial kugadzirwa nyore uye yakachipa kugadzira Po-2 akaramba kusvikira 1953, uye Repair Workshops - kusvikira 1959.
Yezviri ndege upenyu U-2, iyo zita muna 1944, pashure pokufa ane N.Polikarpov kuna Po-2, rwakatora kupfuura 40 makore. Magadzirirwo yairamba zvakachinjwa kubudikidza Polikarpov kuti Bureau uye kugadzira uye munda okudhindira. Vanopfuura 32,000 aircrafts dzakavakwa (mu miti Russian) - ichi chechipiri uremu ndege munyika. Ndege zita remadunhurirwa rokuti se "nyurusi" by NATO uye "Kukuruznik" ( "zviyo duster", okurima Version) muRussia.
Information about zvose zvakasiyana shanduro uye okunatsiridza ose U-2 (Po-2) hapana evergeneralized sezvairi. Hapana ane wozvinyora zvose asi.
Chaizvo wayo kukura uye kubudirira kwakanga kushandiswa U-2 somunhu usiku bhomba muHondo Yenyika II. Vanopfuura hafu bhomba mutoro, yadonhedzera zvachose zvose aircrafts veSoviet 1941-1945 nekugamuchirwa "Aircrafts matanda uye jira".
Tinofanirawo vanotaurawo akakurumbira "Night Varoyi" - hadzi zvikwata of 46th Taman Guards chemazana chehondo, uyo akarwa noumhare yavo U-2.
The chikuru kushandiswa ndege iyi zvechokwadi yaiva kwokutanga mutyairi wendege kudzidziswa. Pamberi 1941 pamusoro 50,000 vezvikepe akadzidziswa musi U-2.
Huru nani U-2 ave nomurovedzi kwakanga kwakakura ndege waivako - chete kudekara piloting, vakaderera kumhara kumhanya uye chokwadi chokuti ndege akanga zvakaoma ndokuiswa tailspin.
Chimwe undoubted nani kaiva wehunyambiri kumhanya kubhururuka zvine - vanenge 2 m / s simbe RPM. Asingasviki parachuti iyoyo.
No pfungwa vazadze mafuta tangi kupfuura 40% kuti aerobatics.
No Starter kana jenareta muna Shanduro iyi, saka kutanga manually:
- Yakatarwa throttle kuti usimbe uye muvhenganiswa wakazara akapfuma
- Chinja chinotsva cutoff 'kuvhura "
- Tinya mhikuriso Primer 3-4 nguva
- Chinja magnetos kuti "1 + 2"
- Chinja tenzi bhatiri riri
- Chinja kuti "injini kutanga" maonero
- Tinya mumwe Prop reza
Kana womupepanhau Ctrl + E
Polikarpov U-2 (Po-2) kunonoka dzakatevedzana v1.0 FSX & P3D Download
Iris P-40 Warhawk - The kuedza FSX & P3D
Downloads: 17 367
Downloads: 14 991
Downloads: 12 643
Downloads: 4 706
Downloads: 5 699